Dowladda oo ugu yeertay Madashii shalay "Isbahaysi doorasho diid" | KEYDMEDIA ONLINE
Dowladda oo ugu yeertay Madashii shalay “Isbahaysi doorasho diid”
Wasiirka warfaafinta xukuumadda xil gaarsiinta Soomaaliya Cusmaan Dube oo la hadlayay warbaahinta madaxa bannaan ee dalka ayaa eed u jeediyay Madasha Badbaado Qaran kuna tilmaamay Isbahaysi doorasho diid ah!
MUQDISHO, Soomaaliya - Isagoo la hadlaya warbaahinta madaxa bannaan ee ka howl gasha magaalada Muqdisho Wasiirka Warfaafinta xukuumadda Xil gaarsiinta Soomaaliya Cusmaan Dubbe ayuu ka jawaabayay su'aalo ay weydiinayeen wariya-yaasha ku sugnaa goobta maadaama uu horay uga cararay su'aalo la weydiiyay wasiirka.
Wasiirka ayaa ku tilmaamay Madasha Badbaado Qaran ee shalay looga dhawaaqay magaalada Muqdisho Isbahaysi doorasho diid ah! isagoo aan ka xishoon madaxdii hore ee dalka iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka iyo weliba guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi oo kamida xubnaha Isbahaysiga.
Madasha ayaa ka kooban madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland, Guddoomiyaha Golaha Aqalka iyo xubno ka socda Golaha Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya 2021, waxaana loogu mgac daray Madasha Badbaado Qaran.
Wasiir Dubbe oo ka jwaabayay Su'aal ahayd sidee u aragtaa Golaha? ayaa ku jawaabay Isbahaysiga Doorasho Diid ah! taasoo u muuqata mid aan sax ahayn, Goluhu wuxuu diyaar u yahay in la qabto doorasho, cidda diiddan ee doorasho la'aanta ka faa'iideysanaysa ee ku jirta seeto dheereyska waa hoggaanka sare ee dowladda kuwaasoo muddo xileedkoodu dhammaaday!
Goluhu waxay doonayaan in la qabto doorasho daah-furan, xur iyo xalaal ah, Farmaajo iyo kooxdiisuna waxay rabaan in ay sii joogaan inta muranka doorashadu socdo, waxayna qorsheynayaan in ay soo laabtaan, sidii ay ku soo laaban lahaayeena ay hadda dadaalkeeda wadaan!